I-EURJPY yooVimba-Funda ukuRhweba
I-EURJPY iyaqhubeka nePatheni yayo yokuBanga kwiBullish Flag Formation
Ukuhlaziywa: 22 January 2022
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURJPY-Januwari 21
EURJPY continues its ranging pattern in its bullish flag formation. The market has been cranking through a descending channel and that is set to continue. The price has turned downward after reaching the upper border of the descending channel. Shortly before the drop, the market had struggled to hold above the 130.690 price level. If this had been successful, EURJPY would have tried to force itself out of the pattern. But as it is now, the price is dropping.
EURJPY Amanqanaba abalulekileyo
Amanqanaba okumelana: 134.150, 130.690
Amanqanaba enkxaso: 127.630, 125.420
EURJPY Ixesha elide Trend: Bullish
Price formed the bullish flag after it broke out of a bigger triangle pattern on December 2021. The combination of these patterns signifies the bullish strength in the market. EURJPY stopped short of an upsurge at the 134.150 significant level. From here, the price started cranking downward via the descending channel of the bullish flag. After striking the upper border, the price continues its undulation cycle by dropping to the lower border.
On the daily chart, the MA (Moving Average) Cross has now crossed downward just below 130.690 to signal the drop in the market. The RSI (Relative Strength Index) indicator can be seen plunging below the midway line into a bearish zone. These indicators confirm that the price is finishing its current cycle. The market is expected to rise again towards the upper border to break it.
EURJPY Ixesha elifutshane iTrendi: Bearish
The current bearish nature of the market is well pronounced on the daily chart as well as the 4-hour chart. The Moving Averages periods 9 and 21 are lying on the 4-hour candles, applying downward pressure. Meanwhile, the RSI line has touched down on the oversold border. The price is expected to reverse at the 126.630 price line or below it.
tags Itshathi yemihla ngemihla, EURJPY, Forex Analysis Technical, Ulindelo lweNtengiso, Price Action
Uqikelelo loNyaka lwe-EURJPY (2022)
Uqikelelo loNyaka lwe-EURJPY-iXabiso limiselwe ukukala iHeights eNtsha ngeBullish Flag Formation
Uqikelelo lonyaka lwe-EURJPY lelokuba inyuse imigangatho emitsha, ihambelane nokwakheka kweflegi. Ukubunjwa kweflegi, ihlumelo lepateni yonxantathu, yaqala ukuya esiphelweni somsila ka-2020 njengoko iinkunzi zenkomo zaqala ukusebenzisa ulongamo kwimarike. Imakethi yaqala ukubuyisela ukusuka kwinqanaba lenkxaso ye-116.910 ngoMeyi 2020. Yabuyela emva xa iqala ukubetha umda ophezulu wepateni yonxantathu kwaye yadlula kuyo ngexesha lesibini lokubuza, ngaloo ndlela ikhokelela ekudalweni kwepateni yeflegi.
I-EURJPYJPY iMimandla ebalulekileyo
Iindawo zokubonelela: 134.150, 140.650, 149.010
Iindawo ezifunekayo: 113.920, 116.910, 127.630
EURJPY iSicwangciso seXesha elide: Bullish
Impembelelo ye-bearish ibonakala ngonyaka kwiimarike, ngokukodwa ukususela ngo-2013. Ngalo lonke ixesha i-EURJPY yenza i-bullish move, intshukumo inqunyulwe ngaphambi kwexesha kwaye ihlala ikhokelela ekujikeni emva kwinqanaba le-113.920 yemfuno. Oku kwenzeka ukususela ngo-2013 ukuya ku-2016, kwaye emva koko ukususela ngo-2017 ukuya ku-2020. Isiphumo sisakhiwo semarike esinenxantathu. NgoJuni ka-2020, ixabiso liye lafika kwinqanaba le-116.910 lemfuno kwaye laqala elinye ukunyuka, kodwa ngeli xesha, ekugqibeleni laphula ipateni yonxantathu ngoSuku loNyaka oMtsha luka-2021.
Ipali yeflegi yenziwe njengoko ixabiso lenyuka ukusuka kwi-120.920 kwaye lamiswa ngokukhawuleza kwi-134.150. Emva koko, i-EURJPY yaqala ukukrazula kwisitishi esihlayo. Oku kuqhubekile ukuya kunyaka ka-2022. Uqikelelo lwemalike lolokuqukuqela kokunyuka kwemali yokuhlawula amatyala. Umqondiso ophezulu we-MA Cross usasebenza kakhulu. Ngeli xesha, i-Moving Average Convergence Divergence isalathisi sibonisa imivalo ehlayo ye-bullish. Oku kungenxa yokuhla kwemarike. Imigca yayo yemiqondiso ihlala ingaphezulu kwenqanaba le-zero.
EURJPY iSicwangciso seXesha eliPhakathi: Bearish
Ekuqaleni kuka-2022, amaxabiso amiselwe ukuba ehle emva kokubetha kumda ongaphezulu wejelo elijikelezayo. I-MA Cross iqondiswe ezantsi-ecaleni ukubonisa ubume bemarike yangoku. Kunokuthiwa okufanayo kwisalathisi se-MACD.
Uqikelelo lonyaka lusiya ekupheleni konyaka ka-2022 ukuya ekuqaleni kuka-2023 xa ipateni yeflegi kulindeleke ukuba iqhubele phambili imarike ukuya kwi-140.650.
I-EURJPY ikwindlela yokuPhula phezulu
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURJPY-Januwari 7
I-EURJPY isendleleni yokwaphuka ukuya phezulu kubunjwa beflegi yayo. Ekuqaleni kukaDisemba kunyaka odlulileyo, ixabiso lehla kumda ophantsi weflegi (ekwadibanisa nexabiso le-127.630). I-EURJPY emva koko yaphuma kweli nqanaba kwaye ngoku isendleleni ephezulu. Ixabiso, ke ngoko, lizibeka kwindawo yokuthatha ithuba lolwakhiwo lwentengiso ukuphuma kwisakhiwo sayo seflegi.
Amanqanaba enkxaso: 127.630, 122.680
Ukulandela ixesha lokuphazamiseka kweemarike, i-EURJPY yathatha umzamo omkhulu kwaye yafikelela kwinqanaba lokumelana ne-134.150. Indibaniselwano yamandla ehlayo yagoba umkhombandlela wexabiso ezantsi, kwaye abathengi bemakethi baqala ukusebenzisa eli thuba ukwenza ixabiso kwisakhiwo se-bullish. Ke ngoko, i-EURJPY ilandele umkhondo ongaguqukiyo ukwenza ubume be-bullish.
Imarike yaqala ukuhla ukusuka kwi-131.860 kwaye iye yahlanjululwa phantsi ukuze yenze i-lows ephantsi ide ifike kwinqanaba lenkxaso ye-127.630. Ixabiso ngoku liphinde laphuma kweli nqanaba liqhubela phambili ukuya kumda ongaphezulu wesakhiwo seflegi. UMnqamlezo we-MA ubonisa ukuqina olomeleleyo, uwele phezulu. I-Oscillator ye-Stochastic, nangona kunjalo, ingene kummandla ogqithisiweyo kwaye ixabiso libuyela kwi-130.690 ukuze imarike iphule umda ophezulu wesakhiwo seflegi.
Kwitshathi yeeyure ze-4, ixabiso liye lawela kwi-130.690 kwaye liza kuphinda liqalise ukunyuka kwayo ukuze liphule umda ophezulu weflegi. Sele kukho umnqamlezo ophezulu kwisalathisi se-MA Cross. Imigca ye-Stochastic Oscillator iye yaphuma kumda wommandla ogqithisiweyo kwaye iye yawela phezulu. I-EURJPY ilindeleke ukuba iqhube i-130.690 kwaye iphule umda ophezulu wokwakhiwa kweflegi ukuya kwi-134.150.
I-EURJPY ilindeleke ukuba iqhume phezulu ngokuhambelana nepateni yeflegi
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURJPY-nge-31 kaDisemba
I-EURJPY kulindeleke ukuba iqhume ijonge phezulu emva kokuba ihambelane nephethini yeflegi. Ngaphambi kokuba iphepha leflegi liqalise ukwenza, ubude bepali yeflegi babufikelele kwinqanaba lokumelana ne-134.150. Ixabiso linokubonwa lihla linyuka ngomjelo. Ngokwenza njalo, iphule inqanaba elilandelayo eliphambili kwi-130.690. Imakethi ngoku iphumle kwinqanaba eliphantsi elingundoqo kwi-127.630 kwaye idibene ukusuka kweli nqanaba ukuya phezulu.
EURJPY Amanqanaba aPhambili
Amanqanaba enkxaso: $ 116.910, 127.630
Ukutshintsha kwabathengi ku-$ 116.910. Imakethi yaqala ukuba yi-bullish ukusuka apha, ngokukhawuleza inyuke ngaphezu kwe-122.680 ngaphambi kokuba ihlehlise ukubuyisela. Yaphinda yaphakamisa kwaye yehla kwi-retracement malunga ne-122.680. Emva koko, imarike yanda ukuze yenze ipali yeflegi ekubunjweni kweflegi. Ipali yeflegi ithatha ngaphezulu kwe-9% yokwanda kwemarike, kwaye imali yokuhlawula amatyala ilindeleke ukuba ihambe phezulu nangakumbi.
Ipali yeflegi yenziwa kuqala, kwaye ke iflegi yeflegi nayo yenziwe ngaphantsi kwe-134.150 yokumelana nenqanaba. Ixesha le-MA le-80 (i-Moving Average) lisebenza njengenkxaso kwimarike ngokudibanisa ne-127.630. Kumjikelo wangoku wokuthotywa, i-EURJPY kulindeleke ukuba iphume kwipatheni yeflegi. I-bullish engulfment candlestick bubungqina boku. I-Relative Strength Index (RSI) ibonisa ukuhamba kwemarike ye-bullish eyomeleleyo njengoko umgca wayo udlula kwi-midlevel ukuya kwinqanaba eligqithisiweyo.
EURJPY Ixesha elifutshane iTrendi: Bullish
Kwitshathi yeeyure ezi-4, imarike ikwi-bullish eninzi kakhulu njengoko inyusa i-trendline. Ixesha le-MA lihlala lingaphantsi kweekhandlela, linika inkxaso efunekayo. Isalathisi se-RSI sibonisa ixabiso kwingingqi ye-bullish kwaye ijikeleza ngaphantsi nje kommandla othengisiweyo njengoko imarike ibuyisela umva kwaye iqhume phezulu phezulu ngamaxesha.
I-EURJPY iBuyisa kwakhona ukusuka kwi-Lows ukuya kwi-128.40, iGxila kwiShift kwiNtlanganiso ye-ECB
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURJPY-nge-10 kaDisemba
Isibini se-EURJPY sibuyisela kwi-lows ngoLwesihlanu ukurhweba kwi-128.40 ye-intraday ephezulu. Emva kokufumana abathengi malunga nenqanaba le-127.81 emini, isibini sibonakala sisendleleni yokugqiba iveki malunga ne-0.17 yepesenti ephezulu. Njengoko ingqalelo itshintshela kwiveki ezayo Intlanganiso ye-ECB, ukungaqiniseki ngobhubhane kubeka isibini phantsi koxinzelelo.
Amanqanaba okumelana: 130.00, 129.50, 129.00
Amanqanaba enkxaso: 128.00, 127.50, 127.00
I-EURJPY yexesha elide iTrend: Ukutshintsha
Umnqamlezo okwangoku uthengisa malunga ne-128.34, kunye nenqanaba lokuchasana elilandelayo kwi-128.58 kunye ne-129.00 (umqobo wengqondo), kwaye ekugqibeleni i-130.00 njengenqanaba eliphezulu elilandelayo. Ngakolunye uhlangothi, ukuwa phantsi kwenqanaba le-127.38 (iveki ephantsi kunye ne-Dec 3) iya kubonisa inqanaba lenkxaso ye-127.30 ngokukhawuleza kwaye, ekugqibeleni, amanqanaba amakhulu e-127.00.
Ngokubanzi, i-EURJPY yobugcisa bemihla ngemihla yetshathi ibonisa ukuba ukuvala imihla ngemihla ngaphezu kwe-128.50 kunokunika umfutho wokufudukela kwirejista enye ephezulu ngaphambi kokuphela kwe-2021. ixesha elide.
I-EURJPY yexesha elifutshane leTrend: Bearish
I-EURJPY ihlala kwi-127.50 / 129.00 uluhlu kwixesha leeyure ze-4, kunye ne-intraday bias engathathi hlangothi. Ukuphulwa kwezinga le-129.00, ngakolunye uhlangothi, kuya kubhekisela ekuhlolweni kwakhona kwe-130.00 ephezulu. Ngexesha eliphakathi, nangona kunjalo, izinga lotshintshiselwano linokwenza i-pullback yexesha elifutshane ngokubhekiselele kumgca othe tyaba wenkxaso kwi-127.50.
I-rally eyongezelelweyo ngaphakathi kweshaneli yexabiso eliphakathi kulindeleke ukuba inqanaba lokumelana ne-129.00 libambe. Okwangoku, ukuphulwa kwenqanaba le-128.00 kunokuhambisa i-bias kwi-downside, ebonisa ukuhla okuphawulekayo kwinqanaba lenkxaso ye-127.00.
I-EURJPY Ukuqhubeka Ukuwa phantsi kweNqanaba eliphakathi kwe-127.00
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURJPY-nge-3 kaDisemba
Okwangoku, i-EURJPY iyancipha ngakumbi isenokwenzeka ngaphantsi kwenqanaba eliphakathi kwe-127.00. "Xa iimfuno zesikhokelo sangaphambili zanelisiwe, asiyi kuthandabuza ukwenza okuthile," UMongameli weECB Christine Lagarde uthe ekuqaleni ngoLwesihlanu. I-EUR / JPY sele iza kuphelisa iveki ngokuhla okuphawulekayo ngaphantsi kwemimandla ye-127.50.
Amanqanaba okumelana: 129.61, 129.04, 128.50
Amanqanaba enkxaso: 127.00, 126.50, 126.00
NgoLwesihlanu, i-EURJPY yavula phezulu kwi-127.91 kwaye yafudukela kwi-128.34 intraday. Aba babini bahlehla, njengoko iibhere zavela njengabahwebi bagxile kumanqanaba angaphantsi kwe-128.00. Ukuphanda i-bearish scenario, ukuwa okuqinisekileyo okungaphantsi kwe-127.50 kufuneka kugcinwe. Aba babini banokuqhubeka bewa, kunye nabathengisi be-bearish bajolise kwinombolo ejikelezayo ye-127.00 njengenjongo enokwenzeka.
Nayiphi na i-rebound evela kwi-127.00 inkxaso ethe tye ithathwa njenge-middle-term phase bullish reversal ngaphakathi kwendlela yokudibanisa ixesha elide. Ngethuba nje inqanaba lokuxhaswa kwe-127.50 liphulwa kwaye ukuwa kugcinwe, kulindeleke ukuba kuqhutywe i-bearish. Ukuqhawula okunamandla kwe-127.50, ngakolunye uhlangothi, kuya kuqinisekisa ukuba ukuphulwa okuphantsi kuphelile, ukubuyisela i-128.50 ekugxininiseni.
I-EURJPY isasebenza phantsi ukusuka kwi-20 ka-Oktobha i-medium-term high ye-133.47, kwaye i-intraday bias ihlala iphantsi. Ukuba inkxaso kwi-127.00 ibambe njengenkxaso, i-rebound inokwenzeka. I-rebound rebound edlulileyo i-128.50, ngakolunye uhlangothi, iya kubuyisela yonke inzuzo kwaye iqhube ixabiso kwi-130.00.
Inqanaba eliphakathi kwexesha le-128.50 ukuchasana kuya kuba yinjongo elandelayo. Imbuyekezo eqhubekayo ngaphezu kwenkxaso ehlaziyiweyo kwi-127.50, ngakolunye uhlangothi, inokuguqula i-downtrend kwaye yandise uluhlu olusuka kwi-133.47 kwinqanaba kunye nesigaba esitsha sokuhamba phezulu.
I-EURJPY yehla ukuya kwi-Lows Kufuphi ne-128.00 Ukulandela ukuBuyisa kwe-COVID
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURJPY-Novemba 26
I-EURJPY ibini yawa kwiseshoni yesithathu ngokulandelelana ngoLwesihlanu, iyancipha kwindawo ye-lows yakutshanje kwi-128.00 uluhlu. Njengohlobo olutsha lwe Covid inzima kakhulu kwiimvakalelo zabatyali-mali, inzala yokuthenga ngamandla kwi-yen yaseJapan ibeka i-EURJPY phantsi koxinzelelo olongezelelweyo kumanqanaba angaphantsi kwe-129.00.
Amanqanaba okumelana: 130.50, 130.00, 129.61
NgoLwesihlanu, i-EURJPY yavula phezulu kwi-129.31 kwaye yaya ngaphantsi kwi-127.79 ye-intraday lows ilahlekelwe phantse i-1%. Ezi zibini zixutywe, njengoko iibhere zavela kwaye abahwebi bagxile kumanqanaba angaphantsi kwe-128.00. Ukuphanda imeko ye-bearish, ukuwa okuqinisekileyo okungaphantsi kwe-128.00 kufuneka kusekwe.
Aba babini banokuqhubeka bewela kwiseshoni elandelayo, kunye nabathengisi be-bearish bajolise kwindawo ye-127.00 njengenjongo enokwenzeka. Ngethuba nje inqanaba lenkxaso ye-128.00 libambe kwaye ixabiso ligcinwe ngasentla, ukuzuza okungakumbi kunokulindeleka. Ukuqhekeka okunamandla kwe-128.50, ngakolunye uhlangothi, kuya kuqinisekisa ukuba i-rebound evela kwi-127.79 ephantsi ifikile ukuhlala, ibuyisela le nto iphantsi ekugxininiseni njengezantsi esitsha.
I-EURJPY isathengisa nge-bearishly ukusuka kwi-Okthobha ephezulu ye-133.47 kwiitshathi zeeyure ze-4, kwaye i-intraday bias isengaphantsi. Ukuba ukuchasana kwi-128.50 kubambe, ukuhla okungaphezulu kunokwenzeka. I-rebound rebound edlulileyo i-128.50, ngakolunye uhlangothi, iya kudibanisa kwi-rebound yonke ukusuka kwi-127.79 ephantsi.
Ukuxhaswa kwexesha eliphakathi kwajika inqanaba lokumelana ne-130.00 liya kuba linqanaba elilandelayo lokuxabana. Ikhefu lenkxaso ehlaziyiweyo malunga ne-128.00, ngakolunye uhlangothi, inokuguqula i-rebound kwaye yandise umlenze ophantsi ukusuka kwi-130.00 kunye nesigaba esitsha sokuhla ukuya phakathi kwe-127.00 kwiseshoni ezayo.
I-EURJPY i-Pair iyaqhubeka nokuhla ngokuZinzileyo, Ukuqhawula i-128.00
Ukuhlaziywa: 21 Novemba 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURJPY-Novemba 19
I-EURJPY currency pair iyaqhubeka nokulahlekelwa ngumhlaba, iwela ngaphantsi kwenani elijikelezayo elibalulekileyo le-128.00 ngoLwesihlanu. Ukuza kuthi ga ngoku, ukurhoxa kwesibini esineeseshoni ezininzi kubonakala ngathi kudibene nenkcaso enzima kwimimandla ye-130.00. Kunikwe amandla okuba ECB Ukungaqhubi kakuhle ngasemva kwezinye iibhanki ezingoovimba be-G10 ekunyuseni amaxabiso, i-EUR irhoxa ngaphezulu kolindelo olulindelekileyo.
Amanqanaba okumelana: 132.50, 131.50, 130.50
Amanqanaba enkxaso: 127.93, 127.00, 126.72
Ukwandiswa kwe-downtrend kunokuqwalaselwa, njengoko kubonakala imihla ngemihla ngaphantsi kwe-avareji ehambayo ye-5 kunye ne-13 phantsi kwenkxaso ethe tye kwi-128.50. Ngaphaya kweli nqanaba, uhlalutyo olunqamlezayo kulindeleke ukuba luhlale lulungile. Ngomqondo omkhulu, ukunyuka ukusuka kwi-125.09 kubonisa isigaba sokunyuka kwexesha eliphakathi ngaphakathi kwendlela ethe tye yexesha elide.
Ukuphendula kuluvo olunamandla oluthanda i-yen yaseJapan, utyekelo lokuthengisa kwi-EURJPY luphinde lwaqala emva komceli mngeni omfutshane wemimandla ye-130.00. Umnqamlezo awuzange uwele ngaphantsi kwezithintelo ze-128.50 kungekudala emva koko, kodwa uphinde wabetha iiveki ezininzi ezisezantsi ngaphantsi kwezinga le-128.00.
Emva kokubetha uphawu lwe-127.98, i-EURJPY ibuyisela kwakhona kwaye i-intraday bias ihlala ingalunganga. Ngethuba nje i-129.03 inqanaba lokumelana nexesha elisondeleyo libambe, ukuhla okungaphezulu kuqikelelwe. Ukuhla ukusuka kwi-129.98 kubuyisela ukunyuka ukusuka kwi-127.98 lows.
Ukuphulwa okuqinileyo kwinqanaba le-129.03, ngakolunye uhlangothi, kuya kubonisa ukuba i-pullback esuka kwinqanaba le-129.98 iphelile. I-Intraday bias iya kubuyiselwa umva ukuya phezulu ukuze kuhlolwe kwakhona lo mphakamo. Sinokubona ukuphumla okongeziweyo njengoko inkxaso yexesha elifutshane ingena kwinqanaba le-128.50.
I-EURJPY ihleli phantsi koxinzelelo njengoko i-Yen yaseJapan iqinisa
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURJPY-Novemba 5
The EURJPY yawa i-0.50 ekhulwini emini, kwaye yayirhweba kwi-130.97 ngexesha lokubhala, kwaye iphantsi koxinzelelo ngenxa yokungafuni kwebhanki ephakathi ukunyusa inzala. Aba babini bawela kwiiveki ezi-3 ezisezantsi kwi-130.83. Ngaphandle koku kugqabhuka kulandelayo kulo mmandla, umnqamlezo usekude nommandla ombi ngolwesiHlanu.
Amanqanaba okumelana: 133.47, 132.91, 131.50
Amanqanaba enkxaso: 130.50, 129.61, 128.58
Isinyathelo esisezantsi silungisa nje kwaye sinakho ukusasazeka kummandla we-130.50, apho umgca wokuchasana ngokukhawuleza (uphezulu kaSeptemba) ukhona. Ngethuba nje ixabiso ligcinwe yinqanaba lenkxaso elithe tye kwi-131.00, ukuthambekela emnqamlezweni kuthathwa njengethemba.
Kwiskimu esikhulu sezinto, ukuhla konke okuvela phezulu kwe-134.12 kufuneka kuphele malunga ne-127.93. Ukubuyiswa kwe-127.93 kunokujolisa kwi-61.8 yepesenti yokubuyisela ukusuka kwi-134.12 ukuya kwi-128.00, kunye nenqanaba elilandelayo kwi-130.00. Inqanaba liya kumiselwa kwinqanaba le-134.50 ngokuphulwa okuqhubekayo kwangoku (133.48 high).
I-EURJPY iTrend yexesha elifutshane: Ukutshintsha
I-4-hour Relative Strength Index (RSI) ibonisa ukuba i-EURJPY ilahlekelwe yinto ethile. I-rebound enzima ukusuka kwinqanaba le-130.83 isathanda ukuhla ukuya kwinqanaba eliphantsi le-130.50, kunye nenqanaba elincinci lenkxaso kwi-130.47 echanekileyo.
Ukuphulwa kwenqanaba le-130.47, ngakolunye uhlangothi, kunokutshintsha i-bias kwinqanaba le-130.00 ukuya ngaphantsi. Ikhefu linokuthi liqalise kwakhona isilayidi malunga namanqanaba e-130.50 ukusuka kumanqanaba e-131.00, okukhokelela ekubuyiseleni kwakhona ukusuka kwi-130.50 ukuya kwi-131.50 amanqanaba.
I-EURJPY ijongana nokuchasa kufutshane ne-133.00 njengoko i-ECB isilela ukukhulisa i-Euro
Ukuhlaziywa: 29 October 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURJPY-Okthobha 29
Emva kokunyuka ukusuka kwi-lows yeveki phakathi kwe-131.00s, ukunyuka kwe-EURJPY kujongene nomqobo wokuqala kufutshane ne-133.00 ekupheleni kweveki. Nangona kunjalo, abathengisi babuyele kwimarike, betsala isibini sibuyela kwindawo embi. I Intlanganiso yeECB ngoLwesine akazange avelise naziphi na izigqibo ezitsha, njengoko kwakuxelwe kwangaphambili; kodwa, i-Euro yasabela ngokukhawuleza ekunqongopheni kweLagarde ukucaca kwiingxelo malunga namaxabiso emarike yangoku.
Amanqanaba okumelana: 134.15, 133.47, 132.91
Amanqanaba enkxaso: 131.50, 130.75, 130.00
Itshathi yemihla ngemihla ye-EURJPY ibonisa imijikelo emininzi, igxininisa uphawu lwe-fractal yesenzo semarike. Ngenxa yoko, ukuwa okungaphezulu kunokwenzeka, kwaye umnqamlezo unokuhla ube phantsi njengemimandla ye-131.50. Ukuba uxinzelelo lokuthengisa luyehla, ummandla olandelayo wokuchasana uya kuba kufuphi nenqanaba le-122.87.
Ngenxa yendlela eqhubekayo, imbonakalo ye-bullish ye-EURJPY kulindeleke ukuba ihlale ihleli nje ihleli ingaphezulu kwenkxaso enyukayo ye-trendline kwi-127.93. Ngokwahlukileyo, kukho ummandla othile oqinileyo wengxabano kwi-132.50 / 91 band phambi kwenqanaba le-133.50.
I-EURJPY ihlala idityanisiwe ukusuka kwinqanaba le-133.47, kunye ne-intraday bias yokuqala engathathi hlangothi. Ngaphantsi kokuhlehla, amanqanaba enkxaso angaphezulu kwe-131.50 kufuneka afunwe ukuze kuqhutywe enye irali. Kwi-upside, ukuphulwa kwe-132.91 kujoliswe kwi-100 yeepesenti ye-projectionion ye-127.93 ukuya kumanqanaba angama-130.50 ukusuka kumanqanaba angama-128.58 ukuya kumanqanaba angama-133.47.
Nangona kunjalo, ikhefu lezinga le-131.50 lingabonisa ukukhwela kwexesha elifutshane kunye nokunyathela kwi-downside ye-pullback. Nangona umnqamlezo ungangena kwixesha elifutshane lokuzinza kwixesha elisondeleyo, ukuhla okongeziweyo akufanele kukhutshwe.
← Entsha izithuba1 2 ... 11 abaDala izithuba →